अष्ट्रेलिया विशेषः विहेपछि श्रीमतीको भिसा आवेदन कसरी गर्ने ?
मैले पीआरको लागि दिएको आवेदनसँगै फाराम नं ८० पनि बुझाएको थिएँ । तर त्यसमा केही गल्ती भएको मैले पछि मात्र थाहा पाएँ । यसलाई सच्याउन मैले के गर्नु पर्दछ ?
अष्ट्रेलिया विशेषः घर भन्दा खुशी ठुलो !
प्रश्नः हामीले भर्खरै पिआर पायौं र पहिलो पटक घर किन्दै छौं । हामी दुवै जनाको काम सिटी र एअरपोर्टको छेउमा भएकोले गर्दा टाढा गएर घर किन्न मन छैन ।
अष्ट्रेलियामा हरेक दिन धुम्रपानका कारण १७ जनाको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा एचआइभी संक्रमित पीडित दरमा कमी आयो
अष्ट्रेलियामा एचआइभी संक्रमित पीडित दरमा गएको १८ वर्ष यताकै सबैभन्दा कमी आएको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अस्ट्रेलियामा कस्ता शरणार्थीले मान्यता पाउँछन् ?
मेरो एउटा साथीको भिषा सकिएको चार महिना भइसक्यो । भिषा नभए पनि उसले शरणार्थी (रिफ्युजी) भिषाको लागि आवेदन दिन पाउँछ रे हो ?
अष्ट्रेलियामा व्यवसाय खरिद बिक्रि गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कानुनी पक्ष
नेपाली डायस्पोरामा व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दो छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने यो क्रमलाई राम्रो रुपमा लिनु पर्दछ । यो पटक मैले यस क्रममा कानुनी रुपमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुलाई समेटेको छु ।
डिभोर्स गर्न के श्रीमान÷श्रीमती दुवैजना अस्ट्रेलियामै हुनुपर्छ ?
एजेन्सी । यो स्तम्भमा म ‘फ्यामिली ल’ को सेरोफेरोका जिज्ञाशालाई समेट्दैं छु । पारिवारिक कलह, घरेलु हिंसा वा सुझबुझमा नै हुने डिभोर्स वा त्यसले निम्त्याउने सम्पत्ति बाँडफाँड र बालबच्चाको रेखदेख ।